watchOS 9 na-ewebata recalibration batrị maka Apple Watch Series 4 na 5 | Akụkọ iPhone
watchOS 9 na-ewebata recalibration batrị maka Apple Watch Series 4 na 5
E gosipụtara watchOS 9 n'akụkụ iOS 16 na macOS Ventura na isi okwu mmeghe nke WWDC22. Kemgbe ahụ, anyị abanyelarị na beta nke abụọ maka ndị mmepe nke sistemụ arụmọrụ ndị a niile. Ọtụtụ n'ime atụmatụ ewepụtara dị ugbu a maka ndị mmepe na ọ ga-adị maka ọha na eze mgbe Apple wepụtara beta ọha n'ime izu ole na ole. Otu n'ime novelties nke 9 nche nche bụ ntinye nke sistemu nhazi batrị maka Apple Watch Series 4 na 5. Ekele dịrị ya Atụmatụ ndụ batrị ga-abụ nke ziri ezi karịa karịa na watchOS 8.
Apple Watch Series 4 na 5 ga-emezi atụmatụ ndụ batrị na watchOS 9
Na iOS 15.4 Apple tinyekwara usoro nrụpụta batrị yiri nke ahụ maka iPhone 11. Ekele maka usoro a. ngwaọrụ ahụ nwere ike ịtụgharị ma kwalite ọkwa batrị, na mgbakwunye na àjà data ndụ batrị ziri ezi karịa, nke bụkwa isi mgbe ị na-atụle mgbanwe ngwaọrụ ma ọ bụ ọbụna batrị.
Nke a bụ watchOS 9, nnukwu mmelite maka Apple Watch
Mgbe emelitechara na watchOS 9, Apple Watch Series 4 ma ọ bụ Series 5 gị ga-emegharịgharị wee tụọ ike batrị ya kacha nke ọma.
Otu ihe ahụ ga-eme na watchOS 9. Dị ka ndetu nke sistemụ arụmọrụ ọhụrụ sitere na Apple nke dị na ọnọdụ beta, Apple Watch Series 4 na 5 ga-emegharị batrị ha mgbe mbụ ha malitere. Ozugbo emechara nhazi ahụ, watchOS 9 ga-egosipụta atụmatụ ikike kachasị nke ọma, na-abịaru nso na ezigbo data.
Usoro a ga-abụ akpaka na onye ọrụ ga-enwe ike ịlele nsonaazụ ikpeazụ, ọ bụ ezie na ọ gaghị ama usoro nke ime ime na-eme. Ihe anyị maara bụ na usoro a nwere ike were izu ole na ole, dịka o mere na iOS 15.4 na iPhone 11 ọnwa ole na ole gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ozi IPhone » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » watchOS 9 na-ewebata recalibration batrị maka Apple Watch Series 4 na 5
Ọrụ ndị enyi anyị ga-erute Spotify site na "Community"